Huawei ayaa dhaaftay 200 milyan oo taleefan oo la soo diray 2018 | Androidsis
Dhowr toddobaad ka hor ayaan taa kuu sheegnay Huawei waxay dejisay hadafka ah in ka badan 200 milyan oo telefoonno la soo diray in 2018. Gool in soo saaraha Shiinaha Waxaan rajeynayey inaan helo Sannadkii ka hor Wax aakhirkii dhacay, maxaa yeelay sumadda ayaa ku guuleysatay inay dhaafto astaantan ay aasaaseen. Nooc ka mid ah istiraatiijiyaddiisa inuu Apple kaga sarreeyo darajada soo saaraha.
Tani waa rikoodhkii abid ee shirkadda Huawei illaa hadda. Sumadda Shiinaha ayaa sii kordheysa sanadba sanadka ka dambeeya, illaa iyo haatanna waxay gaareen hadafkoodi 2018. Inkastoo hadafyada sanadka soo socda ay yihiin hami qurux badan sidoo kale.
Xaqiiqda ah in la diro macnaheedu maaha in la wada iibiyey. Tiradan oo ah 200 milyan ayaa waxaa ku jira taleefannadii ay Huawei ka iibisay adduunka oo dhan sannadka 2018. Laakiin waxaa kale oo ku jira kuwa hadda ku jira keydka dukaamada taleefannadooda lagu iibiyo.
Laakiin waa shay muujinaya in shirkadda Huawei ay horumar ballaaran ka samaynayso suuqa adduunka. Maaddaama ay jiraan tiro aad u fara badan oo taleefannada noocyada ah oo laga heli karo dukaamada adduunka. Waxay u maleyneysaa sidan, ka fiicnaaday Apple sida telefoonada la soo diray.
Sannadkii 2017, tirooyinka liiskan waxay ahaayeen sidan soo socota: Samsung waxay gaysay 317,3 milyan oo unug, Apple 215,8 milyan iyo Huawei oo ku jira booska saddexaad oo ay la socoto 153,1 milyan. Sababta oo ah, sanadka 2018 miisaska ayaa loo rogay. Ilaa iyo sanadkaan, soosaaraha Shiinaha wuxuu dhaafayaa Apple.
Sidaa darteed, marka xogta rasmiga ah la muujiyo, waxaan arki karnaa in Huawei uu dhaafay Apple iibinta iyo telefoonada la diray labadaba. Sidan oo kale, astaamaha Shiinaha ayaa raaci doona daba-galka Samsung, oo ay rajeynayaan inay ku fadhiistaan ​​suuqa dhowaan. Iyadoo la tixgelinayo kobaca weyn ee ay leeyihiin, layaab ma noqon doonto haddii ay guuleystaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Huawei wuxuu dhaafey 200 milyan oo telefoon oo la soo diray sanadka 2018